OromiaTimes: Waamicha Ayyaana Irreessaa 2007: Bergen, Norway
Waamicha Ayyaana Irreessaa 2007: Bergen, Norway
Dhim issaa: WA’EE AYYAANA IRREESSAA 2007- BERGEN ILLAALA
Oromoon biyya issaa irraa fagaatee biyya ormaa keesat akka lamii lamaafaat illaalamaa jiraatus; Aadaa, duudhaa fi seenaa issaa otoo hingatiin dhaloota dhufuuf dabarsuu caraqiin gochaa jiruu akka salphaati hin illaalamu. Issaan kana keesaa ayyaa Irreessaa kabajuun issaa tokkoodha.
Akkuma bekamuu Ful. 30/2006 Ayyaan Irreessaa sirna o’aan (yeroo jalqabaf jechuun ni danda’ama) magaala Bergenit (Bergen, NORWAY) kabajamee oluun issaa ni yaadatama.
Akasuma baranas ”Irreessaa -2007” magaalaa BERGEN keesat gaafa 29/09/2007 sirna o’aan kabajuuf qophiin barbachissa ta’ee godhamaa jiraachuu issa isniif ibsaa, guyyaa kana akka Ayyaan kana walin ayyaanefanuu kabajaan issin affeeruu keenya gamachuun isniif ibsina.
Koree Irreessaa 2007
Gepostet von OromiaTimes an 8:32 pm
Erga gaarii dha galatoomi. Oromoon Oromuummaa isaan ofiin boonuun daran barbaachisaa dha.
Kabiraan waan dhuunfaatti si yaadachiisuu fedhu; Afaan Oromoo irratti xiyyeeffannaa kennuun qabsoo nu gochaa jirru keessaa isa tokkoo fi isa dursaati. Kanaaf itti fayyadamuun muttessaa dha. Ergaa kee armaan olii keessatti hirdhinni heddoommatee muldhata. Mee sirreessachuuf jabaadhu. fky. eegala irraa " Dhim issaa" Dhimmi isaa ta'a. "illaala" kan jedhu Ilaalaa ta'a. Mee akka kanatti hunda isaa keessa deemii sirreessi.